Dhibaatooyinka Uu Qaadku Dhaliyo: Qalinkii Nimco Faysal | Somaliland Today
← Guddoomiyaha Baanka Dhexe Ee Somaliland Oo Ka Hadlay Dollarka Oo Kor U Kacay Iyo Xeerk Bangiyada Somaliland Halka Uu Marayo.
Xanuunkii Gabadhayda “Sheeko Gaaban” BY:Ismaaciil C.qaadir Ismaaciil “Maslax →
Dhibaatooyinka Uu Qaadku Dhaliyo: Qalinkii Nimco Faysal
Maadooyinka kala ah xashiinshada ,hafyoonka ,morfiinka ,hiiroowinka ,kookeynta iyo qaadka leeyahay u gudbo dhibtooyinka qaadku leehay waxana ka mida Gaasteri; oo ay sababto maadada [tannis] qaadkana waxay ka tahay maadadani.
Dhibaatooyinka uu qaadku dhalliyo inta badan dhibaatada qaadku saamay-say dhalinyaraada guud ahaan waxan in taa usii dheer isagoo qaadku dhalinyarada kala dagaalama mustaqbalkooda isla markaana rajo beel ka dhigaya noloshooda ,kuna abuuraya niyad jab iyo xaalad dhaqaale xumo Aqoonyanada ku kala nool daafaha adduunka ee wax ka sheega qaadka midba si ayuu u qeexay uu yahay geed qaad .
Balse hore ayaa loo yiri[ ninba maankii haku meel maro] isla markaa aniguna waxa ku qeexiya laah; qaadku waa geed mukhaadiraad ah caafimaadkans u daran sababtuna waa maadada loo yaqaan [kaatiin] kuna dhex jirto qaadka hadaba qaadkii qeexnay waxa is waydiin leh waa maxay haadirad? mukhaadiraadku waa maado kasta oo hadii la isticmaalo ku keenta jidhika dhib iyo shid ,caqliga iyo maanka doorisa ,had iyo jeerna qofka isticmaalaa wuu la qabsadaa waxan ugu caansan mukhaadiraadka .
Maadooyinka kala ah xashiinshada ,hafyoonka ,morfiinka ,hiiroowinka ,kookeynta iyo qaadka leeyahay u gudbo dhibtooyinka qaadku leehay waxana ka mida Gaasteri; oo ay sababto maadada [tannis] qaadkana waxay ka tahay maadadani[7-14%] bixitaankiisa mushkilad galmo ,cunto xumo ama cunto diid.hurdo yaraan. shhwada oo qubata ama maadooyinka ku jira qaadka oo dareenka kicinaya , kadibna dheecaanada xukumaya ay shaqadoodii u diyaar garoobaan soona daynayaan shahwaadii , qabsin ,tafiir daciif ah oo lagu arko ilamaha uu dhalay aabo qaadku cunay ,qaadiro ama ilway- naad waxaan kula talinayaa qof kasta inuu ka fogaado cunida qaadka ilayna waynu aragnaa dhibtiise.
Qalinkii Nimco Faysal